အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: သူငယ်ချင်း အတွက်....
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:23 AM
အရမ်း ကောင်းတယ် ညီလေးရေ :D
လူလူ ဆိုတဲ့ ကောင်းမလေး.. ဘလက်ဒရင်းလို သူငယ်ချင်းရတာ ကံကောင်းတာပဲ ဟေ့ ..
all the words in this articles are very essential for me rght now!!
Great essay, bro. I plainly love it. Obviously, you're improving, man. Just buzz me whenever you create new works.
it's me, Mintasay... :)
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ အခက်အခဲဆုံး အချိန်ကိုပြပါဆိုရင်…။ ငါကတော့ ဖြစ်သင့်တာ နဲ့ ဖြစ်ခြင်တာ စစ်ခင်းတဲ့ အချိန်ကိုပဲ ပြရလိမ့်မယ်…။
အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ ဘ၀ရဲ့ အစီအစဉ် မကျနမှုတွေနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေဟာ တကယ်တော့ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်သူ တွေ အတွက် အကောင်းဆုံး ဟာသတွေပါပဲ…။
Whatamodernize thoughts. Wickedly inpressive.
အားဆေးတစ်ခုပဲအစ်ကို။ ဒီစာဖတ်ရတာ အားတွေတက်လာတယ်။ အရမ်းကောင်းတာပဲ။
လိုချင်တာတွေရရင် ပျော်ရွှင် ပြုံးပျော်တတ်ကြတဲ့ ငါတို့တွေ… အရာရာကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုရင်လည်း အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ မျက်ရည်ကျတတ် ကြရမယ်လေ…။ ဒီတစ်ကြောင်းလေး အကြိုက်ဆုံးပဲ။
အချို့က အိပ်မက်က နိုးထတဲ့အခါ မောပန်းတယ်တဲ့၊ အချို့ကတော့ ပျော်ရွှင်တယ်တဲ့။ မက်တဲ့ အိပ်မက်ပေါ်ပဲ မူတည်မှာပေါ့နော်။ ဒီအိပ်မက်တစ်ခုကိုတော့ ၀ိညာဉ်လို မပျောက်ကွယ်စေချင်ပါဘူး။ ထာဝရ ရှင်သန်နေစေချင်ပါတယ်။
နင့် ပိုစ့်လေးက COMMENTSတွေများကြီးပဲ.. ဘာလို့မှန်းတော့သိဘူး ငါတောင်ပျော်လာပြီ.. ဟီး...
လူးလူးကိုဒီပို့လေးကရည်ညွန်းထားတယ်ဆိုတော့...ရေးထားတဲ့သဘောအရဆိုရင်တော့လူးလူးမှာ"ဖြစ်ချင် တာနဲ့ဖြစ်သင့်တာ"ဝေခွဲလို့မရဖြစ်နေတယ်နော်။အဲဒါဆို လိုချင်တာတွေများနေလို့ထင်တယ်။လောကနီတိမှာအဲဒီလို လိုချင်တာများတာဟာ"လောဘ"ကြောင့်ပါတဲ့။အဲဒါ ကိုထိန်းနိုင်ရင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့လူးလူးလေးဖြစ် သွားမှာအမှန်ဘဲ။
ပုထုဇဉ်လူတိုင်းမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေရှိပါတယ်.. လိုချင်တာတွေလဲရှိပါတယ်.. ကိုငဘ မှာလဲရှိမှာပါ.. အဲ.. နောက်ပြီးလူတိုင်းမှာ လောဘဆိုတာလဲရှိပါတယ်.. လိုချင်တာများတာဟာ"လောဘ" ဆိုတာ လောကနီတိမဖတ်ဖူးပင်မဲ့ ကျမသိပါတယ်.. နောက်ပြီး ကျမက "ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာ" ဝေခွဲလို့မရဖြစ်နေတာမဟုတ်သလို စာရေးသူ ပိုစ့်ထဲမှာလဲ အဲလိုမရေးထားပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ကျမက ဖြစ်ချင်တာတွေကိုအသိစိတ်နဲ့ထိမ်းပြီး ဖြစ်သင့်တာတွေချည်းလုပ်နေရလို့ စာရေးသူကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ဖူးတာတော့အမှန်ပဲ.. အဲဒါကြောင့်သူကလဲ သူငယ်ချင်းကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို birthday present အနေနဲ့ရေးပေးတာပါ.. ကျမခုလဲပျော်ရွှင်နေပါတယ်.. ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ လောဘကတော့ရှိတုန်းပဲ.. မောဟလဲရှိတယ်.. ဒေါသလေးလဲရှိလို့ ခုလို reply လုပ်တာဝင်ခံပါတယ်.. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ personally ကျမပြောချင်တာကတော့ ကျမနာမည်က "လူလူ" ပါ.. "လူးလူး" မဟုတ်ပါဘူး.. လူအများစုကတော့ "လုလု"လို့မှားတတ်ကျပါတယ်.. ကိုငဘနဲ့ကျမ ကျမလဲ "လူး"ရတော့တယ်.. လူးလူးလို့ဖတ်လိုက်ရတာ မောလိုက်တာ.. တော်တော်တော့ creative thinking ဖြစ်တယ်နော်.. ဟတ်..
အရမ်း ကောင်းတယ် အရမ်း ကောင်းတယ် အရမ်း ကောင်းတယ် အရမ်း ကောင်းတယ် အရမ်း ကောင်းတယ်
ဘ၀က စစ်တုရင် ကစားရသလောက် စဉ်းစားရလို့လား?
ကျရာ အခန်းမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်လိုက်ကြတာက
ဒီ ပို့စ် လေးကို ဖတ်လိုက်ရတော့
ဇာတ်ကားနာမည်က မောင်မင်းကြီးသား မောင်မြဖေ လား မသိဘူး
ဇာတ်ကားထဲက လွင်မိုး သေခါနားနီးမှာ သေတ္တာထဲက ထွက်ကျလာတဲ့ လက်ဆောင်စကားလေးတစ်ခွန်း
“အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော” တည့်
လက်ဆောင်စကားတခွန်းဟာ ဘ၀တခုလုံးအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး အမှန်တရား ဖြစ်သွားတယ်